Andre Pirlo Oo Ka Hadlay Guushii Ay Ka Gaareen Roma Xilli Uu Amaan Kala Duldhacay Ronaldo.
Home Horyaalka Italy Andre Pirlo oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Roma xilli uu...
Tababaraha kooxda Juventus Andrea Pirlo ayaa amaaney sida ay ula qabsan karaan Cristiano Ronaldo xidigahisa kale ee da’yarta madaama kooxda difaacaneysa horyaalka Serie A ay 2-0 ku garaacday kooxda Roma.
Ronaldo iyo Ibanez oo iska dhaliyey gool ayeey Juve guu guul ku gaartay Allianz Stadium halkaasoo kooxda reer Talyaani ay sheegteen guushoodii seddexaad oo isku xigta oo horyaalka ah.
Maalin ka dib dhalashadiisa 36aad, Ronaldo ayaa furay gooldhalinta markii kubad uu tuuray uu shabaqa soo taabtay daqiiqadii 22aad ka hor inta uusan Ibanez daqiiqadii 69aad shabaqa iska soo taabtan.
Ronaldo ayaa si toos ah ugu lug lahaa 84 gool tan iyo kulankiisii ugu horeysay ee Serie A ee 2018, isagoo dhaliyay 68 gool isla markaana bixiyay 16 caawin waana in ka badan ciyaartoy kasta oo tartanka ku jira, halka uu heysto shan jeer Ballon d’Or uu haatan dhaliyay 16 jeer guud ahaan 17 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan.
Pirlo wuxuu amaaney rabitaanka Ronaldo ee ah inuu la qabsado ka dib markii Juve ay garaacday Roma, isagoo u sheegay suxufiyiinta: “Tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka, Cristiano wuxuu naftiisa la qabsan karaa baahideena garoonka.
Ciyaaraha qaar wuxuu u ciyaaray sidii lambar sax ah oo sagaal ah markii aan weydiisanay weeraryahankeena kale inuu xiro kubad sameeyaha mucaaradka.
Ciyaarahaas, wuxuu u ciyaari karaa meel u dhow rigoorada oo wuxuu noqon karaa mid wax ku ool ah marka loo eego gooldhalinta.
“Had iyo jeer waa uu la qabsan karaa waxa aan ka codsaday inuu sameeyo xilli ciyaareedkan sidaas darteedna aad ayaan ugu qanacsanahay qeybtan sida aan u ciyaarno.
Juve ayaa haatan ku jirta kaalinta seddexaad ee Serie A iyagoo raadinaya markoodii 10aad oo isku xigta ineey hantaan Scudetto.
Xidigaha Pirlo ayaa afar dhibcood ka danbeeya kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Milan kuwaas oo la filayo inay ciyaar adag wajihi doonaan Crotone axada Juve ayaa guuleysatay lix kulan oo isku xigta tartamada oo dhan, waxaana Pirlo uu intaas raaciyay: Ma aqaano hadii ay aheyd qaab ciyaareedkeena ugu fiican xilli ciyaareedkan Hubaashii waxaan ciyaarnay ciyaar aad u wanaagsan.
Gaar ahaan maxaa yeelay ciyaartii aan ku ciyaarnay Talaadadii San Siro lugtii hore ee semi-finalka ee ay la ciyaareen Inter ee Coppa Italia. Waxay ahayd inaan soo ceshano tamar xitaa haddii aan wareejinay ciyaartoy badan Kooxda ayaa ku qaadatay tamar badan maskaxeed ciyaartaas.
Waxaan la kulanay koox adag oo Roma ah oo kugu qasbeysa inaad wax badan ka qabato kooxda daafaca waxaan u maleynayaa in gaar ahaan dhinacan aan ciyaarnay ciyaar qurux badan caawa.
Previous articleFalanqeynta Kulanka Adag: Liverpool Vs Manchester City ee Horyaalka Premier League
Next articleSolskjaer wuxuu leeyahay Man Utd kuma jiraan tartanka loogu jiro Premier League.